फेरि केही ब्यथाहरुको बखान | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / फेरि केही ब्यथाहरुको बखान
फेरि केही ब्यथाहरुको बखान
Posted by: युगबोध in विचार January 12, 2018	0 119 Views
एक दिनको कुरा हो , बे लुकीपख प्रौ ढहरु पढ्ने एउटा विद्यालयको कक्षमा सहजीकरण गने र् पालो मनो विज्ञान पढाउने शिक्षकको थियो  । आज एउटा खे ल खे लौ ं भन्दै उनले आफ्नो कक्षाको शुरुमा कुनै एकजना प्रौ ढ विद्यार्थीलाई आफूखुशी अगाडि आएर आफूलाई सहयो ग गर्न भन्छन् । कक्षामा भएका विद्यार्थीहरुमध्ये एलिजा नामकी एकजना महिला अगाडि आउ“छिन् । एलिजालाई मनो विज्ञान पढाउने शिक्षकले कालो पाटीमा आफ्ना परिवारका सदस् यहरु, छिमे कीहरु र साथीहरुमध्ये आफूलाई महत्वपूर्ण लाग्ने तीसजनाको नाम ले ख्न लगाउ“छन् । उनले शिक्षकले भने अनुसार नै कालो पाटीमा तीस जनाको नाम ले ख्छिन् ।
कालो पाटीमा नाम ले खिसके पछि शिक्षकले ले खिएका नामहरुमध्ये कम महत्वपूर्ण पा“चजनाको नाम मे ट्न एलिजालाई भन्छन् । उनले आफूलाई कम महत्वपूर्ण लाग्ने पा“चजनाको नाम मे ट्छिन् । एवं रीतले शिक्षकले भने अनुसार कम महत्वपूर्ण मान्छे हरुको नाम मे ट्दै जा“दा कालो पाटीमा अब चारजनाको नाम मात्र बा“की रहन्छ– एलिजाका बाबा, आमा, पति र छो रा । शिक्षकले अब दुईजनाको नाम मे ट्न भन्छन् । कक्षाको वातावरण गम्भीर हुन्छ र एलिजा स् वयं पनि गम्भीर हुन्छिन् । अन्ततः उनले आफ्ना बाबाआमाको नाम मे ट्छिन् । त्यसपछि शिक्षकले बा“की भएका पति र छो रामध्ये एकजनाको नाम मे ट्न भन्छन् । कक्षाको वातावरण झनै गम्भीर हुन्छ । एलिजाले हात थर्थर कपाउ“दै र आखाबाट आ“सु झादै र् छो राको नाम मे ट्छिन् र मे ट्दामे ट्दै एलिजा भक्कानिएर रुन्छिन् । शिक्षकले एलिजालाई आफ्नो सिटमा गएर बस् न भन्छन् र उनले त्यसै गर्छिन् ।
वातावरण अलि के ही सामान्य र स् वाभाविक भएपछि एलिजाका मनो विज्ञान पढाउने शिक्षक र उनका साथीहरु सबै को एलिजास“ग एउटै जिज्ञासा हुन्छ– बाबा, आमा, छो रा र पतिको क्रम निर्धारण यसरी किन ग¥यौ तिमीले ? जवाफमा एलिजाले गम्भीर भएर भन्छिन्– ‘म मे रा जन्म दिने बाबाआमालाई सम्मान गर्छु । तथापि मै ले चाहे र वा नचाहे र पनि मलाई छो डे र म भन्दा पहिला उहा“हरु जानुहुन्छ नै  । त्यसै ले मै ले शुरुमा बाबाआमाको नाम मे टे ं । त्यसपछि छो रा हुके र् पछि कुनै न कुनै काम, पे शा र ब्यवसाय गने र् क्रममा ऊ पनि मबाट अलग भएर जान्छ र मस“ग बसे र पनि उसलाई सम्भव हु“दै न । त्यसै ले बाध्यतापूर्वक मन दुखाएर उसको पनि नाम मे टे ं र अन्ततः मै ले आफ्नो पतिको नाम मे ट्न सकिन र बा“की राखे ं । कारण स् पष्ट छ कि पत्नीका लागि पति र पतिका लागि पत्नी एकअर्काका जीवनसाथी हुन् लाइफपाटनर हुन् । उनीहरु खुशी र सुखी हुनका लागि स“गस“गै जिउनुपर्छ । त्यसकारण मै ले आफ्नो पतिलाई मे ट्न सकिन ।’ एलिजाको यो तर्क सुने पछि कक्षा झनै गम्भीर भयो र अन्ततः सत्यलाई स् वीकार गरे सबै ले  ।
वास् तविक जीवनको गहिराइमा पुगे र डुबुल्की माने र् हरुलाई सो ध्नुपर्छ, एलिजाले दिएको जवाफ नै जीवनको सच्चा जवाफ हो  । तथापि जीवन भो ग्ने हरुलाई नियाल्दा भने धे रै मानिसहरु यसरी स“गै जिउने जीवनको वास् तविकताबाट धे रै टाढा छन् । एउटा दृष्टान्त, कुनै समयमा यो पङ्तिकारले सामान्य सहयो ग गरे का कारण धन्यवाद दिने क्रममा सविता र उनको पतिस“ग मे रो े परिचय भएको थियो  । भर्खर विवाहबन्धनमा बा“धिएका ती जो डी सा“च्चिकै रहरलाग्दा थिए । सवितास“ग त झन चन्द्रमास“ग तुलना गर्न मिल्ने रुप र सुन्दरता थियो  । तीन वर्षपछि अस् ि त भर्खर भे ट्दा भने सवितालाई त्यस् तो दे खिन । लो भ लाग्दो शरीर र रहरलाग्दो जवानी चिन्ता र उदासिनताले निले को अनुभूति भयो े  । सो धे पछि थाहा भयो , मस“ग भे ट भएको के ही महिनापछि सविताको पति विदे श गएछन् । पतिस“‘ग छुट्टिनु परे को शो कसुर्ताले सुक्दै गइछिन् सविता । लाग्यो , दुबै को त्यति राम्रो भर्भराउ“दो जवानी एकअर्कालाई नभएरै सकिन थाले छ । दे ख्ने लाई त यस् तो पीडाबो ध हुन्छ भने भो ग्ने लाई झन् कति पीडा हो ला, अनुमान गर्न समे त गाह्रो हुन्छ ।
सविताका जस् ता ब्यथा र पीडाहरु हाम्रा वस् ती–वस् ती र टो ल–टो लमा बढ्दो क्रममा छन् । बाहिरबाट हे र्दा र दे ख्दा सुन्दर लाग्ने बै वाहिक जो डीहरुभित्र समे त यस् ता ब्यथाका बिरुवाहरु हुर्कदै गइरहे का छन् । दे ख्दा स् वर्ग झै ं लाग्ने वस् तीहरुभित्र पनि यस् ता पीडादायक ब्यथाहरुका कारण मानिसहरु आ“सु पिएर बा“च्न विवश छन् । युटूवमा सुने पछि थाहा भयो , सडकमा गुड्ने क्रममा सडकबाटै दे ख्दै आएको सुखे र् तको भे रीगंगा नगरपालिकाअन्तर्गत पने र् एउटा सुन्दरवस् ती कालीदमारभित्र पनि एउटा परिवारमा यस् तै एउटा पीडादायक ब्यथा रहे छ । त्यही वस् तीको एकजना युवा कामको खो जीमा विवाहपश्चात आफ्नी जवानीले भरिएकी पत्नीलाई छो डे र मले सिया जान्छन् । मले सियामा गएर काम गने र् क्रममा उनको एउटा खुट्टा मे सिनमा परे र काम नलाग्ने हुन्छ । उनी अहिले विदे शमै ओ छ्यानमा थला परे र बा“च्ने वा आफ्नै को ठामा घुमिरहे को सिलिङ फ्यानमा झुण्डिएर मने र् भन्ने सम्बन्धमा दो धारमा छन् । उनी जसलाई खुशी पार्नका लागि विदे श गए, उनी अर्थात उनकी पत्नीस“ग भने हिजो आज उनको फो न सम्पर्क पनि हु“दै न । अर्थात उनी अकै र् स“ग हि“डिसके को अवस् था छ ।
एलिजाले जवाफ दिए झै पतिका लागि पत्नी र पत्नीका लागि पति गृहस् थी जीवनमा अल्झिएका मानिसहरुका लागि अमूल्य सम्पत्ति हुन् । कहिले काहीं सानातिना विवादको कारणले पतिपत्नीको बीचमा ठाकठूक परे र अब स“गै बसाइ हु“दै न क्या रे भन्ने स् ि थतिमा पुगे काहरु समे त के सा“च्चि छुट्टिन सकिन्छ त भने र घो त्लिदा भने धे रै मानिसहरु छुट्टिन सम्भव छै न भने र मन फर्काउ“छन् । घर छो ड्छु भने र तयार पारे को ब्यागे जसमे त उनीहरुलाई बो क्ने जा“गर चल्दै न । अपवादलाई बिर्सने हो भने , हाम्रा पुर्खा र हाम्रो परम्परालाई नियाल्दा समे त पतिपत्नीबीचको सामीप्यता र सुमधुर सम्बन्धलाई कम आ“क्न मिल्दै न । बुढे सकालमा पुगे का पति बिनाकी पत्नी र पत्नीबिनाका पतिको दिनचर्यालाई आ“कलन गर्दा समे त यस् तो कसै लाई नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना सबै जसो को मनमा उद्वे लित हुने गर्दछ । तथापि यस् तो हुन छाडे को छै न । सायद यो विधाताको खे ल हो ला । बंै शालु पतिपत्नीलाई छुट्याउने कतिपय खे लहरु भने हाम्रो दे शमा कुनै अमूक विधाताले नभई हाम्रै दे शका सत्ताका हर्ताकर्ताहरुले खे लिरहे को अनुभूत हुने गर्दछ ।
दे शमा संघीय शासनप्रणाली आयो  । सबै तहका निर्वाचनहरु पनि भए । तथापि मानिसहरुका आकांक्षाहरु फे रि पनि सम्बो धन नहुने स् ि थति आउने हो कि भने र शंका बढ्न थाले को छ । बिहानीले दिउसो को झल्को दिन्छ भने झै ं स् थानीय तहको निर्वाचनपछिका स् थानीय तहका गतिविधिहरु त्यति राम्रा हुन सके का छै नन् जति आशा गरिएको थियो  । मानिसहरु अधिकारकै हानथापमा लागे का छन् । कर्तब्यका दस् तावे जहरु त कन्टे नरमै गइसके कि झंै लाग्दै छ । युवा शक्तिलाई विदे श पलायन हुनबाट रो क्ने कार्यक्रमहरु कहिले आउने हुन् अत्तो पत्तो छै न । स् थानीय तहको निर्वाचन भएको छ महिना नाघिसक्दा पनि आफ्नो स् थानीय तहमा गतिलो जनशक्तिलाई आकर्षण गने र् किसिमका कार्यक्रमहरु कुनै पनि स् थानीय तहले अघि सार्न सके को छै न । पहिले को झै ं अहिले का स् थानीय तहहरु पनि सक्षम र स् वाभिमानी जनशक्तिको खो जीमा भन्दा पनि आफ्ना वरिपरि फन्को माने र् गणे श प्रबृत्तिका जनशक्तिको खो जीमा दे खिन्छन् । गाउ“–गाउ“मा सिंहदरबार आउ“छ भने र सुने का सिधासाधा मानिसहरु सिंहदरबार आएको हो कि राजदरबार आएको हो छुट्याउन गाह्रो भइसके को अवस् था छ ।
दे शलाई समुन्नत बनाउने काममा त्यो दे शका मानिसहरुले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् । त्यसमध्ये पनि मस् ि तष्कमा सिर्जना र पाखुरामा ताकत हुने हरु पर्दछन् । यसमा विशे षगरी युवा पिढी पर्दछन् । तथापि हाम्रो दे शमा युवा पिढी नै हरे क दिन बो इङ चढे र विदे शिन्छन् । भर्खर विवाह गरे र सिन्दुर हाले की दुलहीलाई हनिमूनकै अवधिमा छो ड्नु पर्दा उनीहरुको मनो विज्ञान यो दे श र यो दे शका राजनीतिकर्मीहरुप्रति कस् तो हुन्छ हो ला ? के सा“च्चि कालीदमारका युवालाई त्यति राम्रो गाउ र भर्खर बिहे गरे की पत्नीलाई छो डे र जानुपर्दा र अन्ततः विदे शमै अपांग भएर जिउनु पर्दा उनको मनले यो दे शका हर्ताकर्तालाई सराप्छ हो ला कि सराप्दै न हो ला ? सविता जस् ता चन्द्रमालाई मात गने र् सुन्दर चे लीहरुको जवानी आ“सु पिउ“दै ओ इलाएर जा“दा त्यसको अपराधबो ध कसै लाई हुने हो ला कि नहुने हो ला ? युवा पिढी यसरी नै विदे श पलायन भइराख्ने हो भने ने ताका अघिपछि लाग्ने भजनमण्डलीका सदस् यहरु, लागूपदार्थ से वन गरे र सडकमा हल्लिने बचे खुचे का युवायुवतीहरु, बृद्धबृद्धाहरु र बालबालिकाको भरमा सघीय शासन प्रणाली कसरी अगाडि बढ्ने हो ला ? सम्झदा पनि कहिले काहीं त उदे क लागे र आउछ ।
अहिले पनि शक्ति र सत्ताकै लुछाचु“डी शुरु भएको छ दे शमा । सत्ता र राजनीतिक ब्यवस् थाहरु भने का पुराना बो तल र नया“ बो तल जस् ता भएका छन् । मानिसका रक्सीरुपी प्रबृत्तिहरु फे रिएका छै नन् । अहिले पनि नया“ ब्यवस् था भने को नया“ बो तलमा पुरानै रक्सी भयो भने दे शका लागि त्यो भन्दा दुर्भाग्य अरु के ही हुने छै न । एलिजाले जस् तै जीवनको अन्तसम्म आवश्यक पने र् ब्यक्तिको रुपमा पति वा पत्नी हो भने र जवाफ दिने जो डीहरु नै जीवनभर छुट्टिएर बस् नुपर्दा उनीहरु जीवनमा खुशी हुन त सक्दै नन् नै , उनीहरुको परिवार, समाज र समग्र दे श समे त खुशी हुन नसक्ने निश्चित छ । दे शमा बचे खुचे का युवायुवतीहरु पनि कुलतमा फसे को अवस् था छ । वषे र् नि २२ अर्ब लागुऔ षधमा खर्च भएको ने पाल प्रहरीको प्रतिवे दन छ । दे श बचाउने र उभो लगाउने हो भने प्रथमतः युवाहरुलाई बचाउने , उनीहरुलाई आकर्षण गने र् र उनीहरुलाई नै खुशी अनि क्षमतावान बनाउने काममा लाग्नुको विकल्प छै न । सबै लाई चे तना भया ।
Previous: हाम्रो बोली र मनोसामाजिक समस्या
Next: मानसिक बिरामीहरु कष्टपूर्ण जीवन जिउदै